Ubugcisa be-SONGZ | Iingoma ze-Songz zeMoto eziMelana noMoya Co., Ltd.
Yasekwa ngoJuni, ngo-2011 kwaye izinze e-Shanghai, i-Air Conditioning kunye neZiko loPhando lweFriji iseke amaziko e-R & D kwizixeko ezahlukeneyo e-China, njenge-Beijing, i-Chongqing, i-Nanjing, i-Hefei, i-Liuzhou, i-Suzhou ne-Xiamen apho ubukhulu becala i-SONGZ isiseko sokuvelisa sikhona ngoku amaziko obuchwephesha kwiphondo nakamasipala nangaphezulu kweengcali zobunjineli ezingama-350, phakathi kwazo ezo ze-master degree nangaphezulu zenza ngaphezulu kwe-10%.
IZiko loPhando lifake isicelo samalungelo awodwa omenzi wechiza ngaphezulu kwama-400, kubandakanya ngaphezulu kwe-100 yamalungelo awodwa omenzi wechiza, kwaye yaqulunqa imigangatho emi-2 yesizwe, imigangatho ye-3 yemizi-mveliso kunye nemigangatho yamashishini angaphezu kwama-40. IZiko loPhando lisebenza kwimizi-mveliso eyunivesithi kunye nophando ngokubambisana neekholeji kunye neeyunivesithi ezinje ngeYunivesithi yaseShanghai Jiaotong, iYunivesithi yaseTongji kunye neYunivesithi yaseShanghai yezeNzululwazi neTekhnoloji kwimpumelelo yezobuchwephesha, ukuphuculwa kwenkqubo yenkqubo, ukulinywa kwetalente ephezulu kunye notshintshiselwano ngezifundo.
Kwi-2018, emva kokuba i-SONGZ ifumene kwaye yabamba izabelo zaseFinland Lumikko, iziko le-R & D eYurophu lasekwa.
Umboniso wePatent Patents
Ingcinga yeR & D
Ngokusekwe kwishishini eliphambili le-SONGZ kwicandelo lesixhobo sokupholisa ibhasi, imeko yomoya wemoto, imeko yomoya ohamba ngololiwe, iiyunithi zefriji yelori, imeko yomoya kunye neziko lophando lwefriji ezibandakanya icrruciton kunye nokusetyenziswa kwezakhono ezili-10 eziphambili.
IZiko leLebhu le-SONGZ
Iziko leLebhu ye-SONGZ ikwi-SONGZ HQ, eShanghai China, exhotyiswe ngaphezulu kweeseti ezingama-20 zezixhobo zovavanyo ezinkulu neziphakathi. Uninzi lwezixhobo zikhokela ekhaya. Itonela yomoya wemozulu, ibhentshi yovavanyo lomsebenzi womoya, igumbi eline-anechoic kunye nezinye izixhobo eziphambili ziye zafikelela kwinqanaba eliphambili lehlabathi. Inokubanakho uvavanyo olubanzi lokujonga icandelo lomoya, inkqubo ye-AC, iHVAC kunye nesithuthi siphela. Inkqubo yeCRM yamkelwe kwiziko lovavanyo ukulawula inkqubo yovavanyo, idatha kunye nezixhobo. Ngo-2016, yamkelwa yi-ISO / IEC 17025: 2005 inkqubo ye-China yokuvunywa kwenkqubo yovavanyo lokuthobela umthetho ngo-2018, iziko lelebhu le-SONGZ livunyiwe yi-BYD njengeSatifikethi sokuVunywa kweLebhu yababoneleli.
Uvavanyo lweBhentshi yoVavanyo loKwenza uMoya
Ibhendi yoVavanyo lomoya
Ibhentshi yovavanyo lokungcangcazela
Ixesha eliqhelekileyo. Igumbi lovavanyo lokufuma
Ibhendi yoVavanyo lwangaphakathi
Isiqinisekiso sokuQinisekiswa kweLebhu esivela kwi-CNAS
Isiqinisekiso sokuQinisekiswa kweLebhu evela kwi-BYD
Isatifikethi sePSA A10 9000
Itonela lemozulu yemoto yemoto
I-SONGZ yetonela yomoya yemozulu idibanise inkqubo yovavanyo oluzenzekelayo kunye nemephu okokuqala e-China. Ngokusekwe kukufota okucacileyo okuphezulu kunye netekhnoloji yokuqhutywa kwemifanekiso, indawo echazayo yalinganiswa kwaye yabalwa ngexesha lokwenyani, eliphucule ngokufanelekileyo ukusebenza kovavanyo. Ikwayimozulu yokuqala yetonela yemozulu edibanisa i-60 kW DC yokutshaja okukhawulezayo, ebonelela ngesiqinisekiso esinamandla sokuphuhliswa kweenkqubo ezintsha zolawulo lwebhetri yesithuthi.
Iziko lemozulu yetonela lomoya likwi-SONGZ HQ, eShanghai, China, egubungela indawo eyi-1,650 m² kwaye inotyalo-mali lwe-USD 17 yezigidi. Yasetyenziswa ngokusesikweni ngoJuni 2018, kwaye inqanaba layo lobuchwephesha likhokelela kwihlabathi liphela.
Uvavanyo lwemeko yokusebenza kokupholisa imoto, uvavanyo lwemeko yomoya yesithuthi, uvavanyo lokuqalisa ukubanda kwesithuthi, uvavanyo lokulinganisa imeko yomoya, imeko yokuhlola imeko yomoya, uvavanyo lwemeko yomoya, uvavanyo lomsebenzi womoya, uvavanyo lomoya womoya phantsi kweemeko zokusebenza kwizixeko eziqhelekileyo , Inkqubo yokuphucula imeko yomoya.
Uyilo kunye nokwenziwa kwenkqubo esekelayo konke kwamkela ababoneleli abaphambili kwishishini. Ukulinganisa kwelanga, i-chassis Dynamometer, ifeni ephambili, inkqubo yokupholisa, igumbi lokuvavanya kunye nezinye izixhobo eziphambili zingeniswe eJamani, zinokulinganisa -30 ℃ - + 60 temperature ubushushu bendalo, i-5% -95% yokufuma kwendalo, kunye nelanga elipheleleyo umsebenzi wokulinganisa kwaye unokuqhuba isixhobo semitha yamandla esisi-4 semoto.
Itonela lomoya alinakuvavanya kuphela imeko yomoya kunye neenkqubo zokupholisa zezithuthi eziqhelekileyo zabakhweli, kodwa kunye novavanyo lwe-tuli lweebhasi ngaphakathi kwe-10 yeemitha ubude kunye neetoni ezili-10 ngobunzima.
Uphando kunye Duphuhliso Umkhwa ye U-Ne EI-nergy
1. Uphando ngokusetyenziswa kweefriji ezahlukeneyo
Hayi Isikhenkcisi Ukupheliswa kweOzone(ODP) Ubushushu beLizwe (GWP)
2. Ukusetyenziswa kwetekhnoloji yesixhobo sokufaka inaliti yomphunga kwicandelo lesithuthi sombane somoya
Emva kokusebenzisa i-enthalpy eyandayo ngokuzalisa itekhnoloji yegesi, kubushushu bendalo -25 ℃ imeko, imeko yomoya inokuqhuba ukufudumeza okuqhelekileyo, xa kuthelekiswa nezixhobo zexesha elidlulileyo phantsi kwexabiso leCOP ezonyuka ngaphezulu kwe-30%, ekhokelela kwixesha "lokubanda" .
Ukonyusa i-Enthalpy ngokuzalisa umzobo we-AC yegesi
3. Impompo yobushushu obuphantsi:
Impompo ubushushu ukusuka ngoku umsebenzi lobushushu ezibalulekileyo - 3 ℃, kunganciphisa - 20 degrees Celsius;
Ukusebenza kwamandla kubhetele kunokusetyenziswa kwangoku kwendlela yokufudumeza ngombane ye-PTC, ekujolise kuko kungu-1.8.
4. Isicelo se-compressor se-CO2-impompo yokushisa ubushushu obusezantsi kakhulu / inkqubo yokubasa ibhetri
Ukusetyenziswa kwefriji yendalo yendalo ye-CO2;
Rotor ezimbini ezizodwa zokucinezelwa kabini kwenqanaba, ukusebenza kakuhle kwevolumu, ukungcangcazela okuphantsi;
Uxinzelelo oluphezulu lwangaphakathi kunye nevolthi yangaphakathi ye-multimeter dc inverter drive, i-40 ~ 100Hz, uluhlu olubanzi lokusebenza; Ukuthembeka okuphezulu, ukusebenza ngamandla okuphezulu, ukukhanya
Uluhlu lokusebenza olubanzi, kwi - 40 temperature ubushushu bendawo engaphantsi kobushushu obuqhelekileyo.